tvOS 14 haikwanise kutamba YouTube mu4K | Ndinobva mac
Kazhinji kashoma. Mushure mematani emabeta vhezheni uye zviuru zvebvunzo, Apple mafewware matsva anozoburitswa uye mamwe mabhugi anoonekwa. Zvinotaridza kuti mamwe emuno mashandisirwo akaiswazve muIOS 14 uye iPadOS 14, uye ikozvino vamwe vashandisi ve Apple TV vaona kuti kambani yakavimbisa kutamba vhidhiyo mu4K (pane zvishandiso zve4K, hongu), uye zvinoita sekunge izvozvi hapana kana chinhu.
Izvi zvichemo zvinotarisana neYouTube, iyo inogona kutamba mavhidhiyo pa1080p zvakanyanya, sezvazvaive pamberi pekugadziriswa. Ngativhurei pfumo tichitsigira Apple, uye pamwe isu tinofanirwa kumirira vhezheni itsva yekushandisa. Chinhu chinoshamisa ndechekuti mune mamwe mabheta e iOS 14 ivo vakakwanisa kutamba mavhidhiyo e4K paYouTube. Izvo zvakataurwa: zvisingawanzo, zvisingawanzo.
Imwe yeTVOS 14 maficha akasimbiswa naApple pachawo yaive tsigiro ye4K mavhidhiyo kekutanga, asi vashandisi vanoverengeka vanga vari vakanyunyuta pane maforamu akasiyana siyana uye vezvenhau kuti 4K vhidhiyo yemukati haina kuwanikwa mushure mekusimudzira Apple TV 4K zvishandiso kuva tvOS 14 Chitatu chadarika
Kana vhidhiyo ye4K ikasarudzwa paApple TV 4K yakakwidziridzwa kuita tvOS 14 zvakanyanya, inokutendera iwe kuti uiridza iyo pane resolution ye 1080p, mhando imwechete yekutamba iyo yaimbove iine tvOS 13.
Apple's Apple TV 4K webhusaiti inoramba ichitaura kuti 4K rutsigiro rweYouTube mavhidhiyo chinhu chinofanirwa kuverengerwa muTVOS 14, asi zvinoita sekunge panguva yezvokwadi hazvigoneke kutamba vhidhiyo YouTube mu4K. Zvirinani izvozvi.
Apple kukanganisa, kana YouTube?
Apple inojekesa kwazvo pane yayo Apple TV peji. YouTube mu4K.
Hatizive kana iko kukanganisa kuri kubva Apple kana YouTube, asi pakave nevazhinji vanogumbura vashandisi veApple TV vachinyunyuta pama network. Vamwe vashandisi vataura kuti kutamba kwe4KK kwaishanda sezvaitarisirwa neYouTube panguva dzeshanduro dze beta, asi kutamba kwanga kusiri kutsetseka zvachose, saka pamwe pane zviputi zvinoda kugadziriswa.
YouTube ingangoda kuvhura update yekushandisa kuitira kuti dingindira rishande sezvarinofanira. Nezuro chete, account yeTimuYouTube yakanongedza munzira iyo 4K YouTube resolution haigone kuunzwa kuApple TV 4K nekuti haitsigire VP9. Parizvino hapana chimwe chinozivikanwa. Tichaona zvinoitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » tvOS 14 haikwanise kutamba YouTube mu4K
Mashandisiro ekushandisa chero sphere pikicha paApple Watch